विदेशी ज्वाइँलाई मासिक ५ लाख तलब दिने सरकारी योजना ! – JanaSanchar.com
विदेशी ज्वाइँलाई मासिक ५ लाख तलब दिने सरकारी योजना !
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७३ फाल्गुन २०, शुक्रबार) २३:४३
हालैका दिनहरुमा युरोपेली मुलुक आइसल्याण्डको खबर निकै भाइरल बनिरहेको छ । जस अनुसार आइसल्याण्ड सरकारले त्यहाँका युवतीहरुसँग बिहे गर्ने विदेशी पुुरुषहरुलाई हरेक महिना ५ हजार डलर तलब दिनेछ । देशमा पुरुषको जनसंख्या घटिरहेका कारण समस्या उत्पन्न भएसँगै सरकारले पुरुष जनसंख्या बढाउन यसरी विदेशी तन्नेरीहरुलाई तलब नै दिएर ज्वाइँ बनाएर देशमा भित्राउने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ ।
समाचार पढिरहँदा कुतकुती जाग्यो होला हैन ? कतै तालुमा आलु पो फलिहाल्छ की भन्ने सोँच्नुुभएको होला । तर धैर्य गर्नुस्, यो हावादारी हो ।
वास्तवमा यस विषयमा कुनै व्यक्तिले द स्पिरिट हि्वस्पर्स नामक ब्लगमा एउटा फेक समाचार लेख्यो । त्यसपछि कैयन् समाचार साइटहरुले यो खबरालई साँच्चीकै खबर ठानेर समाचार बनाए । यतिमात्र कहाँ हो र ?
खबर भाइरल बनेसँगै आइसल्याण्डका कैयन् युवतीहरुले विदेशी अपरिचित युवकहरुलाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन थाले । मानिसहरुलाई लाग्न थाल्यो कि सरकारले साँच्चीकै यस्तो घोषणा गरेछ ।
खबर भुसको आगो झैँ फैलिएपछि सरकार पनि चुप लागेर बसिरहन सकेन । अन्ततः सरकारले विदेशी ज्वाइँलाई तलब दिने विषयमा कुनै घोषणा नगरेको स्पष्टिकरण दिएको छ । साथै अन्य देशका पुुरुषहरुलाई फेसबुकमा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाउने युुवतीहरुलाई कारवाही पनि गरियो ।
स्मरण रहोस्- आइसल्याण्ड विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य मध्ये एक हो । यो चिसो देशका ब्लू लगून, गुलफोस,गोल्डेन सर्कल जस्ता कैयन् पर्यटकीय केन्द्र रहेका छन् । यहाँका युवतीहरु पनि सुन्दरतामा निकै धनी मानिन्छन् । एजेन्सी
(२०७३ फाल्गुन २०, शुक्रबार) २३:४३ मा प्रकाशित